Star Wars™: Commander 7.2.0.10878 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.2.0.10878 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Star Wars™: Commander
Star Wars™: Commander ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့ဘေးထွက်အဘို့စစ်တိုက်ခြင်း။ အဆိုပါက Galaxy ဆင့်ဆိုလော့။
အဆိုပါ Galactic စစ်ပွဲအပေါ်ယခုတိုင်။ အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့သစ္စာအိပ်သနည်း? သင်ပုန်ကန်သို့မဟုတ်အင်ပါယာနှင့်အတူဘက်လိမ့်မည်နည်း တိုက်ပွဲ Join, သင့်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်, သင့်စစ်တပ်စုဆောင်းနှင့်လေ့ကျင့်, ဗျူဟာမြောက်သင့်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစီစဉ်လျက်, နဂါးငွေ့တန်းတစ်လျှောက်လုံးစစ်-ကိုက်ကမ္ဘာအပေါ်အောင်ပွဲခံရန်သင်၏တပ်များဦးတည်သွားစေ!
Darth Vader, လုကာ Skywalker, ဟန်တစ်ကိုယ်တော်နှင့်မင်းသမီး Leia တူအထင်ကရဇာတ်ကောင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်စစ်တိုက်ခြင်းနှင့် AT-ATS တူယူနစ်အသုံးချသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီး Speeder စက်ဘီး, Wookiee စစ်သည်များနှင့် Stormtroopers ။ ဒီမော်ကွန်းတိုက်ခိုက်ရေးနည်းဗျူဟာဂိမ်းထဲမှာကစားရန်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းသန်းပေါင်းများစွာသော Join ။ တပ်မှူးက, နဂါးငွေ့တန်း၏ကံကြမ္မာသည်သင်၏လက်၌ပါ!
•အဆင့် UP သင့်ရဲ့သူရဲကောင်းများ, တပ်များ, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အခြားပိုမို
•အ Star Wars ™စကွဝဠာအတှငျးရှိကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာအပေါ် Battle
အဆုံးစွန်ကစားသမားဖွဲ့စည်းရန်မိတျဆှနှင့်မဟာမိတ်များနဲ့•တွင် TEAM UP
သင့်ရဲ့ command ကိုချဲ့ထွင်နှင့်သင့်ကစားသမားကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ထိုကဲ့သို့သော Dandoran, Yavin 4, Er'Kit နှင့် Hoth အဖြစ်အသစ်သောကမ္ဘာရန်သင့်အခြေစိုက်စခန်း Scout နှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သင့် Planetary စစ်ဌာနချုပ်အဆောက်အဦကိုအဆင့်မြှင့်။
Star Wars: တပ်မှူးအထက်က Android OS ကို 4.0 သို့မဟုတ်လိုအပ်ပါတယ်နှင့် tablet နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှစ်ဦးစလုံးထောက်ခံပါတယ်။
သင်ဤအတှေ့အကွုံကို download လုပ်ပါမီ, ဒီ app များထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ
•ကြှနျုပျတို့သစ်ကိုအကြောင်းအရာတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာ updates များကိုအခါအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံကုန်ကျကြောင်း In-app ကိုဝယ်ယူ, သငျသညျသိစေရန်အကြောင်းကြားစာများကိုတွန်းအားပေး
•ဆုလာဘ်များအတွက်ကြော်ငြာကြည့်ရှုရန် option အပါအဝင်အချို့သောတတိယပါတီများသည် Advertising ကြော်ငြာ
•ကုမ်ပဏီမြား၏ဝေါ့ဒစ္စနေးမိသားစုတွေအတွက် Advertising ကြော်ငြာ
ငါတို့သည်သင်တို့၏သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားပါ။ သင်သည်သင်၏ Device ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးချိန်ညှိ၌သင်တို့၏ Advertising ကြော်ငြာ Identifier ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ရှေးခယျြမှုလေ့ကျင့်ခန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီ app သင်၏ Google Play စအကောင့် access ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျဒီ app ကနေသင့်ရဲ့ device ကိုမှအကြောင်းအရာများကို upload ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။
တရားဝင် Star Wars တပ်မှူး website ကိုကြည့်ရှု - https://www.starwarscommander.com/
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - http://disneyprivacycenter.com
အသုံးပြုခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - http://disneytermsofuse.com
Star Wars™: Commander အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Star Wars™: Commander အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Star Wars™: Commander အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Star Wars™: Commander အား အခ်က္ျပပါ
worldnull စတိုး 549 187.1k
Star Wars™: Commander ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Star Wars™: Commander အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.2.0.10878
ထုတ်လုပ်သူ Lucasfilm Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://disneyprivacycenter.com/privacy-policy-translations/english/
File Size: 82.91MB
Release date: 2018-12-04 08:24:16
လက်မှတ် SHA1: 2B:A9:DF:5A:D7:7C:B9:09:D2:23:76:8F:D5:60:D6:8C:D8:02:93:5B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): StaRTS
အဖွဲ့အစည်း (O): playdom
နယ်မြေ (L): burbank
Star Wars™: Commander APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ